Yohane I 5 NA-TWI - Sɛnea nhyehyɛe no bɛyɛ - Obiara a - Bible Gateway
Yohane I 4Yohane II 1
Yohane I 5 Nkwa Asem (NA-TWI)
5 Obiara a ogye di sɛ Yesu yɛ Agyenkwa no yɛ Onyankopɔn ba. Na obiara a ɔdɔ Agya no dɔ ne Ba no nso. 2 Eyi na ɛma yehu sɛ yɛdɔ Onyankopɔn mma: ɛyɛ ɔdɔ a yɛdɔ Onyankopɔn ne di a yedi ne mmara so. 3 Ɔdɔ a yɛdɔ Onyankopɔn no, kyerɛ di a yɛdi ne mmara so. Na ne mmara no nso so di nyɛ den mma yɛn, 4 efisɛ, Onyankopɔn ba biara tumi di wiase so. Saa kwan yi so na yɛnam di wiase so nkonim: yɛde yɛn gyidi.